ओबामाले खुलाएः कसरी बन्यो विन लादेन मार्ने रणनीति « Bagmati Samachar
ओबामाले खुलाएः कसरी बन्यो विन लादेन मार्ने रणनीति
११ पुष २०७७, शनिबार २२:०२
काठमडाौं । ११ पुस । सन् २००९ मा सिचुएशन रुमको बैठक सकिनासाथ राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्ना केही सल्लाहकारहरुलाई ह्वाइट हासको ओवल अफिसमा लिएर गए र भित्रबाट ढोका बन्द गरे । बैठकमा ह्वाइट हाउसका चीफ अफ स्टाफ राह्म इमानुएल, सिआईएका निर्देशक लियने पनेटा र उप राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार टम डानिलन सहभागित थिए ।
ओबामाले ती अधिकारीहरुलाई ओसामा बिन लादेनको खोजलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन र उक्त खोजको प्रत्येक महिनामा प्रगति प्रतिवेदन आफू समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिए ।
बराक ओबामाको आत्मकथा ‘ए प्रमिस्ड ल्याण्ड’ पुस्तकको कभर
बराक ओबामाले आफ्नो आत्मकथा ’ए प्रमिस्ड ल्याण्ड’ मा लेखेका छन्ः “९ र ११ को ९ औं वार्षिकोत्सवभन्दा एक दिन अघि, सीआईए निर्देशक लियोन पानेटा र उनका नम्बर दुई माईक मोरेलले मलाई भेट्न समय मागे । लियोनले भने “श्री राष्ट्रपति ओबामा हामीले भर्खरै बिन लादेनको बारेमा सुरुवाती संकेतहरू पाएका छौं ।”
“हाम्रा जासूसहरूले अबु अहमद अल कुवैती नामको एक मानिस भेट्टाए जो अल कायदाका लागि सन्देशवाहकका रूपमा काम गर्थे र ओसामा बिन लादेनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेका थिए । हाम्रो जासूसहरूले उनको फोन र दैनिक क्रियाकलाप पत्ता लगाएका छन् र उनले हामीलाई पाकिस्तानको इस्लामाबाददेखि ३५ किलोमिटर टाढा पर्ने एबटाबाद शहरको बाहिरी भागमा रहेको ठूलो कम्पाउन्डमा लगेका छन् । माइकले भने , “कि त्यस यार्डको क्षेत्र र साइजले त्यहाँ एउटा ठूलो मान्छे अल कायदासँग सम्बन्धित रहेको देखाउँदछ ।”
‘द पेसर’ यार्ड भित्र हिंड्दै
दुई महिना पछि, १४ डिसेम्बर २००९ मा, लियोन र माइकको जोडी बराक ओबामालाई भेट्न फेरि आए । यस पटक उनीसँग सीआईए अफिसर र एक विश्लेषक पनि थिए । उक्त अफिसर सीआईएको काउन्टर टेररिज्म सेन्टर र अमेरिकाको बिन लादेन अभियानको प्रमुख थिए । यी दुई व्यक्तिले ओबामालाई सबै तथ्यहरू सूचित गरे, तिनीहरू एबटाबादको त्यस परिसरमा पुगेका थिए ।
भूतपूर्व सीआईए निर्देशक लियोन पनेटाले आफ्नो आत्मकथा ‘भेर्डी फाइट्स’ मा उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, “यो घेरा वरिपरिको भूखण्डहरू मध्ये सब भन्दा ठूलो थियो । नजिकैको भूखण्डभन्दा करीव आठ गुणा ठूलो । यो इब्राहिम र उनका भाइको स्वामित्वमा थियो । माली यस्तो अवस्थामा थिएनन् कि उनले आफ्नो सम्पत्ति एक करोड रूपैयाँमा राख्न सक्छन् । अचम्मको कुरा के थियो भने मालिक भए पनि इब्राहिम भवनको मुख्य भागमा बसेका थिएनन् र परिसरभित्रको गेस्ट हाउसमै बसिरहेका थिए ।
“यस भवनमा तीनवटा तला थिए । माथिल्लो तलामा एउटा बालकोनी थियो, तर यो बालकोनी एउटा पर्खालले ढाकिएको थियो । बाल्कोनीको अगाडि पर्खाल कसले बनाउँछ रु त्यस घरमा न त कुनै इन्टरनेट जडान थियो न ल्याण्डलाइन फोन । हाम्रो निगरानीले देखाउँदछ कि कहिलेकाँही व्यक्ति घरबाट बाहिर भित्र गर्थे र पाइलाहरु छिटो छिटो चाल्थे । “ “हामीले उसको नाम ‘द पासर’ राख्यौं । यस घरबाट मानिसहरू फोहोर उठाउने काम गर्थे, तर घरका मानिसहरूले फोहोर यार्ड भित्रै जलाउँथे ।” सीआईए जासूसहरू यो विश्वास गर्थे कि ‘द पेसर’ ओसामा बिन लादेन हुन सक्छ ।
हवाई आक्रमणबाट यार्ड नष्ट गर्ने विकल्प
ओबामाको भनाईमा पाकिस्तान सरकारले अमेरिकालाई सहयोग गर्दै अफगानिस्तानमा अभियान चलाइरहेको भए पनि तालिबान र अल कायदालगायत पाकिस्तानको सेना र गुप्तचर एजेन्सीका केही तत्वहरू कसैबाट लुकेको थिएन । पाकिस्तान सेना र खुफिया एजेन्सीमा केही तत्व तालिबवान र अल कायदाबाट पनि सहानुभूति पाएका थिए । ओबामाको बिचारमा पाकिस्तानी सैन्य एकेडेमी अबोटाबाद कम्पाउन्ड नजिक छ र यो सम्भावना छ कि यदि पाकिस्तानीहरूलाई यसबारे केही बताइयो भने त्यो व्यक्ति हतारमा त्यो व्यक्तिसम्म पुग्नेछ । ओबामा लेख्छन्, “हामीसँग दुई विकल्पहरू थिए । पहिलो विकल्प हवाई आक्रमणबाट घेरालाई नष्ट गर्नु थियो ।
यसको पहिलो फाइदा भनेको पाकिस्तानी भूमिमा अमेरिकीको मृत्यु हुने खतरा पटक्कै थिएन । सार्वजनिक रूपमा हामी खण्डन गर्न सकथ्यौँ कि यस आक्रमणमा हाम्रो कुनै हात छैन ।” “तर यसको नतिजा यो थियो कि यदि हामी यार्ड नष्ट गर्नमा सफल भए पनि लादेन भित्र रहेको कुरा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? र यदि अल कायदाले यसलाई अस्वीकार ग¥यो भने कसरी प्रमाणित गर्ने कि लादेनलाई मारियो भनेर ?
दोस्रो, यस जोखिमको पनि अस्वीकार गर्न मिल्दैन थियो कि अरु मानिस पनि सँगै मर्न सक्थे । मैले संयुक्त चीफ अफ स्टाफ, वाइस चेयरम्यान होस कार्टराइटलाई स्पष्ट पारिदिए कि म यो अभियानलाई अनुमति दिन सक्दिन जहाँ तीस चालीस मानिस मारिने सम्भावना पनि छ जबकी ओसमा त्यस भित्र छन् भन्ने कुराको पक्का छैन ।
अफगानिस्तानबाट पाकिस्तान प्रवेश गर्ने योजना
ओबामा अगाडि लेख्छन्, “हामीसँग अर्को विकल्प पनि थियो कि एउटा विशेष एप्स मिशनलाई अनुमति दिने, जसमा छानिएका सैनिकहरू हेलिकप्टरबाट पाकिस्तान भित्र छिर्छन् र कम्पाउन्डमा यति चाँडो आक्रमण गर्नेछन् कि पाकिस्तानी पुलिस वा सेनाले प्रतिक्रिया दिने मौका नपाओस् । त्यसैले म वाइस एडमिरल विलियम म्याक्रवेनलाई बोलाइएँ ताकि उनले हामीलाई आक्रमण कस्तो हुन्छ भनेर बताउन सकु ।”
मार्च २९ मा बोलाइएको बैठकमा ओबामाले माइक्रोमेनलाई यो प्रश्न सोधेका थिए कि यदि पाकिस्तानका लडाकू विमानहरूले हाम्रो हेलिकप्टर भित्र छिर्दा वा छोड्दाको समय इन्टरसेप्त गरे हामी के गर्छौं त रु यदि बिन लादेन लुकिरहेको सुरक्षित कोठा पत्ता लगाउन निर्धारित समयभन्दा बढी लगाए भने हामी के गर्छौं रु पाकिस्तानी सेनाले घेराबन्दी गरेका खण्डमा हमलाको सामना कसरी गर्ने रु यसबीच हंस कार्टराइटले एउटा विकल्प दिए, किन एक ड्रोनको सहयोगमा उक्त समयमा १३ पाउण्डको मिसाइल सो भवनमा छोडिदिउँ जतिबेला उनि दैनिक वर्कमा निस्कन्छन् ।
ओबामाको सल्लाहकारहरुसँग मतभेद
ओबामाका नजिकका मानिसमध्ये लियोन पनेटा, जोन ब्रेनेन र माइकल मुलेनले यसको मर्थन गरेका थिए । हिलारी क्लिंटलाई चिन्ता थियो कि यसबाट अमेरिका र पाकिस्तानको सम्बन्धमा समस्या नहोस् । उनलाई यो कुराको पनि डर थियो कि अमेरिकी सेनाले पाकिस्तानी सेनासँग भिड्न नपरोस् ।
हमलाको लागि ओबामाको आदेश
२८ अप्रिलमा बेलुका खाना खाने समयमा ओबामाकी श्रीमती मिशेल र छोरीहरुले उनको पुरानो चप्पलकोबारेमा मजाक गरे जो उनले घरमा लगाइरहन्थे । उनीहरुले यस कुरामा मजा उडाएका थिए कि ओबामालाई मिठा कुरा मन पर्दैनथियो ।
आफ्नी छोरीहरु सुते पछि, बराक ओबामा कोठामा आराम गर्न गए र टेलिभिजनमा बास्केटबल खेल देखे । भोलिपल्ट ओबामा अलाबामा गएका थिए टुसलुसामा आँधीबेहरीको कारण भएको विनाशको रिपोर्ट लिन र त्यस साँझ मियामीमा भाषण दिन ।
त्यहाँ जानु अघि ओबामाले कूटनीतिक स्वागत समारोहमा उनीसँग भेट गर्न टम डोनिलोन, डेनिस म्याकडोनाफ, बिल ड्याली र जोन ब्रेननलाई ईमेल पठाए । ओबमा लख्छन्, मेरो परिवार साउथ ल्याण्ड तर्फ बढिरहेको थियो जहाँ मरीन वन हेलिकप्टर उडानको लागि तयार रहेको थियो । मैले मिसनका लागि अनुमति दिएँ । मैले प्रष्ट पारिदिएको थिएँ कि यस अभियानको कमाण्ड एडमिरल मेकरेवनको हातमा हुनेछ र उनले नै भन्ने छन् कि हमला कतिबेला गर्ने भनेर ।
स्याटेलाइटबाट आक्रमणको निगरानी
२ मे २०११ बिहान ह्वाइट हाउसको अपरेटरले उठाउनुभन्दा पहिले नै ओबामाका आँखा खुले । उनले मार्विन निकलसनसँग एकिछन गोल्फ खेल्ने सोँच बनाए । अक्सर उनी आइतबारको दिन यसो गर्दथे । ओबामा लेख्छन्, ह्वाइट हाउस फर्किसकेपछि अफिसमा केही कागजातहरु देखिइरहेको थियो तर मेरो ध्यान त्यसमाथि केन्द्रित हुन पाइरहेको थिएन ।
एकछिनपछि मैले आफ्नो सहयोगी रेगी, मार्विन र पीटलाई डाइनिंग रुममा बोलाएँ र गोम खेल्न थाल्यौँ । वेस्टर्न स्ट्यान्डर्डको समय अनुसार ठीक २ बजे कालो हेलिकप्टरहरुले उडान भरे । उसमा सील दलका २३ सदस्य सवार थिए र उनकासाथ एक पाकिस्तानी अनुवादक र सैनिक कुकुर कायरो पनि थियो ।
एडमिरल मेकरेवन जलाललाबादमा थिए र लगातार सम्पर्क गरिरहेका हुन्थे । कन्फरेन्स टेबुलमा टम, जो बाइडन, डेनिस लगायत बसेका हुन्थे । ओबामालाई मिसन सफलता या विफलतापछि पाकिस्तान र दोस्रो मुलुकको बारेमा जानकारी गराइन्थ्यो ।
ओबामाको नजर लाइभ फीडमाथि
ओबामा लेख्छन्, जसरी हेलिकप्टर लक्ष्यतिर पुग्न लाग्यो म कुर्सीबाट उठेँ । मैले भनेँ म यो हेर्न चाहन्छु । म नजिकको कोठामा गएँ जहाँ यस मिसनको लाइभ फिड आइरहेको थियो । त्यहाँ निलो बर्दीमा एयरफोर्सका ब्रिगेड जनरल बे्रड वेब एक मेचमा कम्प्युटरको अगाडि बसिरहेका थिए । उनले मलाई आफ्नो कुर्सी दिन खोजे तर मैले उनको काँधमा थपथपाएर उनलाई त्यहिँ निसंकोच बस्न भनेँ ।
जिरोनिमो एनिमि किल्ड इन एक्सन
ओबामा त्यहाँ बसेको एक मिनेटामात्र भएको थियो कालो हेलिकप्टर उत्रिरहेकोबेला थोरै हल्लियो र उसको एउटा पंखा पर्खालमा ठोक्कियो । ओबामा लेख्छन्, एक छिनको लागि त म एकदम डराएको थिएँ कि एकदम नराम्रो हुँदैछ भने । त्यहिबेला मेकरेवनको आवाज मेरो कानमा ठोक्कियो , सब ठिक हुन्छ । उनको आवाजबाट यस्तो लाग्यथ्यो कि मानौँ सपिंग मलमा एउटा कार ट्रलीसँग ठोक्कियो । उनले भने, हाम्रो पाइलट सर्वश्रेष्ठ पाइलट हुन् उनले सुरक्षित हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्ने छन् । र यसै भयो पनि । बीस मिनेटसम्म मैले राम्रोसँग केही देख्न सकिराखेको थिइन कि त्यहाँ के भइरहेको छ । त्यहिबेला अचानक मेकरेवन र पनेटा एकसाथ बोले जो हामी ब्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका थियौँ जेरोनिमो ईकेआईए (एनिमी किल्ड इन एक्शन) कोठामा रहेका सबैको मुखबाट एक उत्साह निक्लियो । मेरो आँखा भिडियो फीडमाथि नै थियो । मैले बिस्तारै भने, वी गेट हिम ।
सैनिकलाई झुण्ड्याएर लादेनको लम्बाइ नापियो
बीस मिनेटसम्म कोही पनि आफ्नो ठाउँबाट चलेनन् । जसो हेलिकप्टरले फेरि उडान भर्यो जो बाइडनले ओबाको काँधमा दबाएर भने, बधाई छ बोस । मेकरेवनले भिडियो कन्फ्रेन्समा भने ः म जब तपाइसँग कुरा गरिरहेको छु लादेको शव मेरो सामने छ । मैले आफ्नो टीमैे एक सदस्य जसको कद ६ फुट २ इन्च छ, उनलाई लादनेको शवको छेउँमा तेस्र्याएर हेरेँ । मृत लादेनको कद ६ फुट ४ इन्च छ । ओबामाले बिल मेकरेवनसँग ठट्टा गरे, तपाई पनि बिल । यति ठूलो मिसनमा जाँदा साथमा नाप्ने टेप लिएर जान भुल्यौ ?
लादेनलाई समुन्द्रमा व्यवस्थापन गरियो
ओसामा बिन लादेनको शवलाई पहिलेको योजना अनुसार समुन्द्रमा व्यवस्थापन गरियो । उनको शवलाई अमेरिकी युद्धपोतले कार्ल विन्सन लगियो । शवलाई सेतो कपडाले बेरियो र फेरि पनि एकदम कालो बोराभित्र राखियो । सिआइएका पुर्व निर्देशक नियोन पनेटाले यसको विवरण दिँदै आफ्नो आत्मकथा बर्दी फाइट्समा लेखेका छन्, लोदका शवको बोरोमा १५० किलोको जञ्जिर लगाइएको थियो ताकी शब समुन्द्रमा डुब्ने निश्चित होस् । त्यसपछि उक्त बोरालाई युद्धपोतको रेलिंगसँग सटाएर सेतो टेबुलमा राखियो । लादेको शवको बोरा यति भारी थियो कि जब यसलाई समुन्द्रमा धेकेलियो भने उसकोसाथ टेबुललाई पनि तल लिएर गयो । तार एकछिनपछि लादेनको शव समुन्द्रको गहिराईमा गयो तर उक्त सेता टेबुल भने डुबेन र समुन्द्रको छालमा तैरिरह्यो ।
सैनिकसँग ओबामाले भेटे
अर्को दिन ओबामा क्याम्पमा गए जहाँ मेकरेवनले ओबामा र बाइडनलाई उक्त टीमसँग भेट गराए जो यस मिसनमा भाग लिएका सेना थिए । ओबामाले ती सबै सैनिकसँग हात मिलाए । उनीहरुले ओबामालाई एक उपहार दिए ।
उनीहरुले अमेरिकी झण्डामा आफ्ना हस्ताक्षर गरेका थिए जो उनीहरुले आफ्नो साथमा एबटाबाद लिएर गएका थिए र उसलाई फ्रेम बनाएर राष्ट्रपति ओबामालाई प्रदान गरे । यस भेटको समयमा कसैले नि यो बताएन कि लोदनमाथि गोली कसले चलाएको थियो न त ओबामाले यसबारे सोधे ।